HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKhalic Metro Metro Construction wuxuu la shaqeeyaa UNESCO iyo saraakiisha ICOMOS
Waxay ku taallaa wargeyska Party "Golden Horn model khiyaamo" ku lug wararka, labada Turkiga uusan ka tarjumaya xaqiiqda ah in falka lagu eedeeyay madax banaan oo digniin ka soo hay'adaha caalamiga ah. Mashruucaan, oo dib loo eegay shaqooyinkii, ayaa la qabtaa Xarunta Dhaqameedka ee UNESCO iyo saraakiisha Caalamiga ah ee ICOMOS.
11 ee wargeyska Taraf Waxaan jeclaan lahaa in aan la wadaagno qodobbada soo socda ee dadweynaha ee maqaalka cinwaankiisu yahay "Tusaalaha khaladka ah ee Horn Horn" oo uu daabacay wariye Serkan Ayazoglu bishii August 2012.
Mashruuca Halic Bridge ee mashruuca, oo ka tirsan Isku-xirka Halicda Isku-xirka ee Halic, dhismaha kaas oo ay fulinayso Maamulka Gaadiidka ee Magaalada Istanbul - Agaasinka Nidaamka Isgaadhsiinta, wuxuu ku saleysan yahay mashruuca lagu ansixiyay 2005.
Mashruucan waxaa loo fuliyaa si waafaqsan cabirada lagu go'aamiyay natiijada ka soo baxday dib u habeynta mashruuca ka dib markii xisaabinta maaraynta injineerada iyo gaar ahaan ka qaybgalka khubaro madax-bannaan oo tixgelinaya khatarta dhulgariirka, xaaladaha culus iyo farsamooyinka kale ee farsamada iyo deegaanka.
Tan iyo bilowgii, shaqada ayaa la fuliyay si waafaqsan go'aamadii guddiga UNESCO ee Guddiga Dhaxalka Dhaqameedka iyo talooyinka Guddiga Khabiir ee Khubarada Madaxa-bannaan ee qaabkan. Marka tan la eego, wararka ka Chamber of Horseedayaashii of Turkey ninba Guddoomiyaha Eyup MUHCU 'IBB labadaba ka Turkey si ay u dhaqmaan si madax-bannaan ee qaylodhaan ay hesho ka imaanaya hay'adaha caalamiga ah' war waa ka fog xaqiiqada. Halista Metro Crossing Bridge ayaa dhowr jeer dib loo eegay talooyinka UNESCO waxaana la wadaagay dadweynaha. Buug-warbixineedka 'Notes Notes', kaas oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo oo loo diro ururada warbaahinta, iyo bogga 'www.istanbulmiraskomitesi.com', kaas oo si faahfaahsan loola shaaciyey dadweynaha, looma dhigi karo 'si qarsoodi ah' sida lagu sheegay warbxintaada. Marka la eego iftiimahaan xaqiiqooyinka, waxaa cad in qiimeyntaani aan loo baahneyn.
Warbixinta Saamaynta Saamaynta Bay'ada ee Khubarada Madaxa-bannaan ee 2005 si loo eego loona isbarbardhigo saameynta dhammaan mashaariicda kale ee bacriminta, oo ay ka mid tahay mashruuca ay ogolaatay Guddiga Badbaadinta Dhaqanka Dhaqanka ee 2010, goobaha Dhaxalka Adduunka, gaar ahaan Masaajidka Süleymaniye, oo lagu diiwaangeliyey Meelaha Taariikha ah ee Istanbul Waxaa la diyaariyey.
Qeyb ka mid ah warbixintan, waxaa la soo jeediyay in qaabka qaabdhismeedka qaabdhismeedka (gawaarida la jiido) ee buundada hadda lagu dhisay Geeska Dhexe ay tahay xalka ugu haboon ee la tixgelinayo halista dhulgariirku, ciidda, deegaanka iyo qaabka dhismaha, laakiin waxaa lagu talinayaa in lagu dabaqo qaar ka mid ah dib u habeynta. Talooyinkaan, oo ay qiimeyn ku sameysay degmada iyo qoraaga mashruuca, ayaa si buuxda uga muuqday mashaariicda hirgelinta.
Marka la eego warbixintan, geeddi-socodka hawsha culus ee la-haysto Guddiga Khabiirada Madaxa-bannaan waxaa lagu martiqaaday in uu soo jeediyo talooyin inta lagu jiro dhismaha Guddiga Dhaqanka Dunida ee 2011 ayaa sii socota si aan kala go 'lahayn.
Natiijada ka soo baxday daraasaddan, laba kulan oo lala yeeshay kaqaybgal ballaaran ayaa la qabtay Xarunta Dhaqameed ee Aduunka iyo ICOMOS International ee ku saabsan mashaariicda dib loo eegay iyo isgaarsiin dhow.
Inta lagu guda jiro diyaarinta mashruuca, si loo soo saaro xalalka seismiciga iyo xaaladaha dhulka ee aagga, qoraaga mashruuca iyo tirooyinka xafiisyada injineernimada aduunka ayaa wada sameeyay.
Isbeddelada looga baahan yahay soo saarista weelka ayaa la fuliyey si waafaqsan talooyinka khubarada madaxa banaan. Ma aha run in codsiyada la abuuray silhouette waayeelnimo.
Buundada, oo dhismaheeda la bilaabay, ayaa ah mashruuca kaliya ee wadada Taksim-Yenikapı, oo wadadii 25 lagu go'aamiyay 1987 sano ka hor, oo laga heli karo oggolaansho Guddiga Ilaalinta ee ku saabsan Geeska Geeska Ah. Mashruuca 2005 ayaa loo gudbiyey Guddiga illaa 12 aan la aqbalin. Dhammaan wejiyada mashruuca, falanqaynta iyo dhismaha waxaa lagu sameeyey kormeer adag iyo ansixinta guddiga, saamaynta xun ee taariikhda taariikhiga ah ayaa la yareeyaa, ujeedkuna wuxuu yahay in la yareeyo gaariga gaadiidka xuduudaha taariikhiga ah.
Xubnaha Guddiga Khabiirada Madaxa-bannaan waxaa lagu casumay inay soo jeediyaan talooyin inta lagu jiro habka soo saarista. Dr. Enzo Siviero, Professor. Dr. Jorg Schlaich, Dr. Tatiana KIROVA iyo Professor Dr. Moawiyah Ibraahim, iyo sidoo kale Michel Virlogeux, Systra, WIECON, Waagner Biro, Hardance & Hanover, Marc Panet, Alain Pecker oo leh khubaro hormarineed oo caalami ah iyo aqoonyahanno, sida dhismaha iyo hirgelinta mashaariicda lagu kashifay kormeerka Dawladda Hoose ee Istanbul oo leh tixraacyo caalami ah shirkadaha.
Buundada gawaarida ee ku jirta Horn Horn ayaa ku dhow in la dhammeeyo | Istanbul
Xarunta Dhaxalka Aduunka
Golaha Gobolka ee Ilaalinta Dhaqanka Dhaqanka
Agaasimaha Nidaamka Tareenka
Madaxweynaha Chamber of Horseedayaashii of Turkey Eyup MUHCU
Sharaxaadda dhismaha Khalic Metro
Ankara Metros Carbeed iyo Imaatinka Gawaarida Howlgalinta ayaa la qabtay